Waxaa qoray admin on 21-02-07
Ka dib muddo dheer oo horumarineed oo ku saabsan warshadaha shumaca, waxaan Winby shumaca soo uruurinnay macaamiil badan waxaanan ka helnay ammaan badan dalal badan. Kuwa soo socda ayaa ah qaar ka mid ah macaamiisha 'aqoonsiga alaabteena iyo adeegyadeena. Kani waa mid cabsi badan, waxaanan ku tijaabiyay sumcaddayda ...
Waxaan qabanay kulankeena sanadlaha ah usbuucii hore, waxay ahayd daqiiqad xiiso badan, oo qofkasta oo inaga mid ah uu wali xasuusan karo. Gudiga asalka ah ee sida gaarka ah loogu talagay kulanka sanadlaha ah. Qof kastaa wuu lebisan yahay wuuna ku kacaa dharka ugu fiican. Miyaanay jirin dareen deg deg ah oo ku saabsan s ...
Shirkadda Winby shumaca waa shirkad xirfadle ah oo soosaarta shumacyo udgoon, dhalooyinka shumaca, shumaca tiirarka iyo shumaca farshaxanka. Waxaan ka soo qeyb galnay Carwada Canton sanado badan, waxaana soo jiidanay macaamiil aad iyo aad u tiro badan oo ka kala yimid dalal badan oo adduunka ah. Illaa iyo hadda, wali waxaan nahay ...